NMR, Tijaabada Optics, Modulus-da Dhallinyarada - Shaqada
Xirmooyinka Waxbarshada Optics
F-29 Fekerka Spectrophotometer
Qalabka tijaabada LCP-3 Optics - Model kor loo qaaday
LIT-6 Sax Interferometer
LPT-6 Cabbiraadda astaamaha sawir qaadaha ...
Qalabka LADP-10 ee tijaabada Franck-Hertz ...
LGS-2 Tijaabada CCD Spectrometer
Tianjin Shaqaalaha Sayniska Sayniska Co., Ltd. Waxay ku taalaa Tianjin Innovation Industrial Park, Laanta Beijing ee Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska ee aagga muujinta hal-abuurka madax-bannaan ee qaran. Xadiiqadda ganacsiga ee Tianjin ee laanta Beijing ee Akademiyada Sayniska ee Shiinaha waa guul muhiim ah oo ay gaadhay shirkadda CAS iyada oo si firfircoon uga jawaabaysa qorshaha guud ee istiraatiijiyadeed ee "horumarinta isuduwidda ee Beijing, Tianjin iyo Hebei" oo ay soo bandhigeen Golaha Dhexe ee CPC ..
Waa maxay foosha？
Hao ping ， wasiirkii hore ee waxbarashada Shiinaha, iyo wasiiro kale oo ka tirsan wasaarada waxbarashada ayaa na soo booqday. waxaan u soo bandhignay takhasuskeena qaabeynta R&D iyo agabyada sayniska suuq geynta iyaga, dhamaantood si qoto dheer ayey ula dhacsanaayeen hordhacayaga.
Taxadarka dayactirka infrared s ...
Sanadihii la soo dhaafay, warshadaha ilaalinta deegaanka ayaa ka faa'iideystay siyaasado badan oo wanaagsan, kuwaas oo la dhihi karo waa laga fadilay. Heerka kobaca warshadaha waa dhowr jeer tan ...
Jaangooyo cusub oo loogu talagalay go'aaminta saliidda ee w ...
Layaab ma leh, dad badani waxay yiraahdaan qalabka ilaalinta deegaanka ayaa ku dhow meel kasta, ha ahaato wax soo saar warshadeed ama nolol maalmeed. “Aaladdan aamusnaanta” ee aamusnaanta ayaa keeneysa wax badan ...
308 qol, F4 dhismaha, No. 6 Huafeng wadada, Huaming aagga warshadaha teknolojiyada sare, degmada Dongli, Tianjin City